avy amin'ny admin tamin'ny 21-06-01
Daty: 13 ka hatramin'ny 15 martsa 2019 H098 Stand 4081
Izahay efa mandroso zavamaniry sy fitaovana miasa, ary ny iray amin'ireo tsipika famokarana vaovao dia hifanaraka amin'ny FDA eropeana amin'ny taona 2018. Ny vokatra lehibe indrindra momba ny biby dia misy ny tsindrona, vovoka, premix, takelaka, vahaolana am-bava, vahaolana araraka ary famonoana otrikaretina. Ny vokatra totalin'ny famaritana samihafa ...
Weierli Group, iray amin'ireo mpanamboatra GMP lehibe 5 lehibe mpanondrana & mpanondrana fanafody biby any Shina, izay natsangana tamin'ny taona 2001. Manana orinasa miisa 4 sy orinasa mpivarotra iraisam-pirenena 1 izahay ary naondrana tany amin'ny firenena 20 mahery. Manana agents izahay any Egypt, Iraq and Phili ...
Ny rafi-pitantanana kalitao dia ahitana ny lafiny rehetra amin'ny kalitao mifandraika amin'ny fotodrafitrasa, vokatra ary serivisy. Na izany aza, ny fitantanana kalitao dia tsy mifantoka amin'ny kalitaon'ny vokatra sy serivisy ihany, fa koa ny fitaovana hanatanterahana azy. Ny fitantanana anay dia manaraka ireto fitsipika manaraka ireto: 1. Fifantohan'ny mpanjifa 2. ...